Welcome (Somali) - Maribyrnong
You Are Here : Home / Welcome (Somali)
Aad ayaan ugu faraxsanahay in aanu nahay mid ka mid ah degmooyinka dadkeedu kala-jaadjaadka yahay. Dad leh jinsiyado, dhaqamo iyo diimo kala duwan ayaa ugu yeera Degmada Maribyrnong hoy kana dhiga magaaladayada meel wanaagsan oo lagu noolaado.
Golaha Degmada ee Maribyrnong waxay siisaa adeegyo iyo barnaamijyo ay helli karaan dhamaan xubnaha bulshadayadu.
Qoraalkaani wuxuu hoosta ka xariiqayaa qaar ka mid ah adeegyadaan iyo barnaamijyadaan oo uu la socdo macluumaad wax ku oolla oo bulshada. Waxaad ka qaadan kartaa koobi lacag la’aana tas-hiilaad kasta ee Golaha Degmada.
Download the Welcome Booklet(PDF, 9MB)
Macluumaadka dukumintigaan ku yaalla waxaa laga yaabaa inuu muhiim kuu yahay.
Haddii aad doonayso wax badan oo dukumintigaan ku saabsan laakiin aad u baahan tahay caawimida tarjumida, fadlan la xiriir Golaha Degmada Maribyrnong tel: 9688 0200 waxaanuna kuu qabanqaabinaynaa mutarjum khadka telefoonka kuugu tarjuma, ama wac Adeega Afcelinta iyo Tarjumida Qoraalka oo ah (TIS) 131 450 weydiisana mutarjum si laguugu waco 9688 0200 magacaaga. Adeega tarjumaada lacag la’aan ayaa lagu bixiyaa.